10 Mirairo yePinterest yeBhizinesi | Martech Zone
China, June 14, 2012 Mugovera, Kukadzi 4, 2017 Douglas Karr
Pinterest inoramba ichitungamira sosi yemigwagwa yeMartech… kunyanya kuburikidza neyedu Kushambadzira Infographics bhodhi. Ini handipedze nguva yakawanda paPinterest sezvinoita vamwe, asi ini ndinonyatsonzwisisa kuti sei iri rakakura chikuva. Zvese zviri zviviri zvinoyevedza uye zviri nyore kutarisa. Iwe unogona kupururudza kuburikidza neatoni yeruzivo mune imwechete kurira kwemunwe!
Izvo zvinotarisirwa kana bhizinesi rikajoinha sevhisi sePinterest zvakasiyana zvakanyanya kupfuura mutengi ajoina, hazvo. Kana iwe uchida kuti bhizinesi rako riwedzere kuwedzera Pinterest kutyaira traffic, iwe unofanirwa kudzora rakakura bhodhi uye chengetedza hurukuro ienderere mberi. Mutengi wedu, Chinyorwa chaAngie, ine huvepo hunoshamisa paPinterest… kutumira zvemukati pane zvese kubva Cars dzekare to Mahwindo nemaDhoo.
Zvemagariro Akarongedzwa uye Mookoo Dhizaina yakadhonza pamwechete iyi infographic, Iyo 10 Mirairo yekushandisa Pinterest yeBhizinesi, Inokutungamira kuburikidza neyakanakisa maitiro uye matipi ekuisa Pinterest kushanda mune yako yemagariro midhiya kushambadzira zano. Iyo infographic yaive yakavakirwa pa posvo kubva kuAmy Porterfield's blog.
Tags: Pinterestpinterest yebhizinesi
Is Social Media Kuuraya Brand Yako?
Jun 15, 2012 na6:49 AM
Ndakashandisa pinterest pawebhusaiti yangu uye mhedzisiro yacho yaive yakanaka, yakasvetuka kubva papeji 7 kusvika #5 mukati isingasviki 2 mavhiki nguva.
Chinokosha ndechekuti isu tinofanirwa kuita kuti webhusaiti yedu yakapinirwe uye nekudhindwazve nevanhu vazhinji, chinova chikamu chakaomesesa. Vazhinji vevashandisi vepinterest havaite repin kana vasina kufanana nezvatakapinza.
Ini ndinoita chinhu chiri nyore kuti ndichibudise pafiverr uye ndikawana saiti yangu yakadhindwa nevanhu makumi manomwe neshanu, handizive kuti angaite sei achingotsvaga nekunyora pinterest pafiverr uye uchaiwana paTOP. Vamwe vatengesi vazhinji vanopa pinterest sevhisi pafiverr asi mune yangu ruzivo havagone kuita kuti webhusaiti yangu iwedzere muSEO. Handizivi kuti sei.
Zvikonzero nei pinterest yakanakira SEO:
1. Iwe unofanirwa ping zvinongedzo zvepini dzako kune iyo kuti webhusaiti yako iwedzere muSEO.
2. Kamwe webhusaiti yedu yakapinza ine backlinks kuverenga.
3. Kunyange zvazvo Pinterest isingatsigire anchor text (kunze kweiyo url link), ichiri yakakwana yekuisa mazwi edu makuru mukutsanangura.